जेष्ठ नागरिकलाई ‘कोभिसिल्ड’को दोस्रो डोज कहिले? यस्तो छ सरकारको तयारी – Health Post Nepal
जेष्ठ नागरिकलाई ‘कोभिसिल्ड’को दोस्रो डोज कहिले? यस्तो छ सरकारको तयारी
२०७८ असार ३० गते १२:०८
दोस्रो लहर उच्च भएसँगै नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने प्रयास भइरहेका छन्।
संक्रमण सुरु भएयता नेपाललाई भारत, चीन अमेरिका र कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत अनुदानमा खोप प्राप्त भएको छ।
तर, उसले १० लाख डोजमात्रै दियो र त्यसपछि अहिलेसम्म बाँकी खोप दिएको छैन।
भारत सरकारसँग खरिद गरेको ‘कोभिसिल्ड’ खोप ल्याउन सरकारको पटक–पटक प्रयास बिफल भयो।
१३ लाख ७१ हजार ज्येष्ठ नागरिकका लागि भने दोस्रो डोज खोपको सुनिश्चितता हुन सकेन।
‘खोप कमिसन’ को चक्कर, भारतमा फैलिएको पछिल्लो महामारी र खोप कुटनीतिमा सरकारी असफलतालगायतका कारणले पैसा तिरिसकेको खोपसमेत ल्याउन सरकार असफल भयो।
१८ हप्तासम्म पनि ६५ वर्षमाथिका नागरिकले ‘कोभिसिल्ड’को दोस्रो डोज खोप पाउन सकेका छैनन्।
तर, जापान सरकारले ‘कोभ्याक्स’ अन्तर्गत मंगलबार नेपाललाई १६ लाख डोज एष्ट्राजेनिका खोप उपलब्ध गराउने जनाएको छ। सो खबर सँगै झन्डै १८ हप्तापछि ६५ वर्षमाथिका नागरिकले दोस्रो डोज खोप पाउने विकल्प पनि खुला भएको छ ।
जापान सरकारले मंगलबार नेपाललाई १६ लाख डोज एष्ट्राजेनिका खोप दिने घोषणा गरेको छ।
जापानले कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत नेपालसहितका एसियाली मुलुकहरुलाई १ करोड १० लाख डोज कोरोना खोप दिने घोषणा गरेको छ ।
जापानका परराष्ट्रमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगीकाअनुसार कोभ्याक्समार्फत जापानले नेपाल, बंगलादेश, कम्बोडिया, इरान, लाओस, श्रीलंका र प्यासिफिक आइसल्याण्डका अन्य देशहरुलाई १ करोड १० लाख खोप अनुदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
खोप यही महिनाभित्र पठाउने योजना रहेको जापानी राजदूत किकुता युताकाले जनाकारी दिएका छन्।
यूताकाले नेपालमा एस्ट्राजेनिका खोपको पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेकाहरुलाई खोप दिने यो उपयुक्त हुने बताएका छन।
सरकारले दोस्रो डोज कोभिसिल्ड खोपको पर्खाइमा रहेका नागरिकलाई दोस्रो डोजका दिन धेरै राष्ट्रसँग खरिद तथा अनुदानका लागि पहल गरिहेको थियो।
विभिन्न देशहरुसँग गरिएको लामो प्रयासपछि जापानले १६ लाख डोज एष्ट्राजेनिका खोप सहयोग गर्ने निर्णयले नेपालका १३ लाख नागरिकको खोप सुनिश्चित भएको छ।
अष्ट्राजेनेका खोप यसअघि भारतले उपलब्ध गराएको कोभिसिल्ड खोप एउटै कम्पोजिसनबाट बनेकाले ‘कोभिसिल्ड’ पहिलो मात्रा लगाएका नागरिका लागि लगाउन सकिनेछ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले जापान सरकारले उपलब्ध गराएको ‘अष्ट्राजेनेका’ खोप कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा लिन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई दिइने बताए।
‘जापानले अष्ट्राजेनेका खोप नेपाललाई पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जुन हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो,’ डा. पोखरेलले भने, ‘ नेपाललाई सो खोप उपलब्ध हुँनासाथ ढिलो नगरि कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा लिन बाँकी रहेका लागि खोप दिन्छौं।’
पहिलो डोज कोभिसिल्ड लगाएकाहरु नागरिक संक्रमणको जोखिमबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित भइसकेकाले आत्तिहहल्नुपर्ने अवस्था नरहेको पोखरेल बताउँछन्।
दोस्रो डोज खोप ढिलो हुँदा कति प्रभावकारी ?
स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप शाखा प्रमुख डा.झलक शर्मा गौतमले खोप पहिलो डोज लगाएका मानिसका शरीरमा ६ महिनासम्म एन्टिबडी रहने बताए।
‘विभिन्न अध्ययन,अनुसन्धानले पहिलो मात्रा लगाएको ६ महिनासम्म एन्टिबडी रहने देखिएको छ,’ डा. गौतमले भन्छन्, ‘दोस्रो मात्रा पाइन, के हुने हो भन्ने मनमा कुनै डर नराखौं।’
पहिलो डोज लगाएका व्यक्तिमा खोपले ६ महिनासम्म काम गर्ने र संक्रमण भइहालेको खण्डमा पनि जटिलता नहुने उनको भनाइ छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले एष्ट्राजेनिका खोप लगाएका नागरिकलाई बढीमा १२ हप्ताभित्र नै दोस्रो डोज खोप दिन सिफारिस गरेको छ ।
सन् २०२१ मार्च १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रकाशन गरेको अष्ट्राजेनिका खोपको प्रभावकारिताबारे गरेको एक अध्ययन रिपोर्टमा १२ हप्ताको भित्र लगाएँदा २ गुणा बढी एन्टिबडी विकास हुने देखाएको छ।
कोभिड–१९ सम्बन्धी अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको द ल्यान्सेटले एष्ट्राजेनिकाको पहिलो डोज खोप लगाएकाहरु संक्रमणको जोखिमबाट ७६ प्रतिशतसम्म सुरक्षित हुने देखाएको छ। त्यस्तै दुवै डोज पाएकाहरु ८२.४ प्रतिशतसम्म सुरक्षित हुने अध्ययनले देखाएको उल्लेख छ।